DEG-DEG: Premier League Oo Go'aan Ka Gaadhay Qorshihii Man United Iyo Liverpool Ee Isbedelka Weyn Kubadda Cagta England Ku Keenayay - Gool24.Net
DEG-DEG: Premier League Oo Go’aan Ka Gaadhay Qorshihii Man United Iyo Liverpool Ee Isbedelka Weyn Kubadda Cagta England Ku Keenayay
October 14, 2020 Apdihakem Omer Adam
Madaxda sarre ee horyaalka Premier League ayaa lagu soo warramayaa inay ka arrinsadeen qorshaha loogu magac daray “Mashruuca sawirka weyn” (Project Big Picture) ee ay wadeen labada kooxood ee Manchester United iyo Liverpool.
Kaddib kulan ay maanta yeesheen kooxaha Premier League, waxa la filayaa in shaqsiyaadka maamulka u ah horyaalku ay shaacin doonaan inuu gabi ahaanba bur-buray oo uu waxba kama jiraan yahay mashruucii ay Reds iyo Red Devils wateen.
Shirka kooxaha Premier League oo mudo laba saacadood ah socday ayaa la isku raacay in lacag 50 Milyan oo Pound ah la siiyo kooxaha heerka hoose ee horyaalada League one iyo League two si ay usii ahaadaan kuwo taagan oo jira.
In lacag la siinayo kooxaha horyaalada heerka saddexaad iyo afraad ayaa caksi ku ah xaalada horyaalka heerka labaad ee Championship-ka kuwaas oo aan gabi ahaanba wax lacag ah ka heli doonin Premier League.
Marka laga yimaado in maamulka horyaalku ay go’aamiyeen inay si toos ah saxaafada horteeda uga diidaan qorshaha mashruucan, Man United iyo Liverpool ayaa sii wadi doona dalabaadkooda ay ku doonayaan in Project Big Picture la hirgeliyo.
Madaxda horyaalka ayaa maanta galay shir deg-deg ah oo ay qoddobo kasoo saari doonaan kana saxeexi doonaan kooxaha kahor inta aan si rasmi ah loo shaacin.
Inkasta oo uusan wali war rasmi ahi soo bixin haddana wargeyska The Sun oo ah midka xogtan keenay ayaa lala wadaagay in uu soo dhammaaday hammigii Liverpool iyo Manchester.
Qorshaha labadaas kooxood ayay kamid ahayd in la kansalo koobabka Community Sheild iyo Carabao Cup sidoo kalena 20-ka kooxood ee horyaalka ka ciyaara 18 lagu soo koobo.